Sida loo isticmaalo dhammaan RAM gudaha Windows 10 | Madasha Mobile
Sida loo isticmaalo dhammaan Windows 10 RAM
Ignacio Sala | 08/10/2021 12:00 | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Marka kumbuyuutarkaagu bilaabo inuu hoos u dhaco sidii caadiga ahayd, waxaad bilaabi doontaa inaad la dhex gasho software -ka kombiyuutarkaaga si aad isugu daydo dib kuugu celiyo dhowr sano oo dhallinyaro ah. Waxaad sidoo kale tixgelineysaa suurtagalnimada beddelidda processor -ka ama ballaarinta RAM, si ay dhowr sano oo kale u sii socoto.
Si kastaba ha noqotee, tani had iyo jeer maahan xalka ugu fiican, maadaama ay u badan tahay in kombiyuutarkaagu uusan adeegsan karin dhammaan RAM -ka aad ku rakibto sababo kala duwan oo la xiriira software -ka iyo qalabka kombiyuutarkaaga labadaba. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo isticmaalo dhammaan RAM-ka ku jira Windows 10 Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 Waa maxay nooca Windows ee aan rakibnay
2 Sida loo isticmaalo RAM oo dhan
2.1 Tallaabada 1 - Ogow tilmaamaha
2.2 Tallaabada 2 - Hubi nooca Windows ee aan rakibnay
2.3 Tallaabada 3 - Ku rakib Windows 10 64 -bit
3 Farqiga u dhexeeya 32 iyo 64 bits
Waa maxay nooca Windows ee aan rakibnay
Windows 10 wuxuu ahaa nidaamkii ugu dambeeyay ee Windows-ka lagu sii daayay laba nooc: 32-bit iyo 64-bit. Adiga oo aan gelin farsamooyin laga yaabo inaadan fahmin, 64-bit processor-ku waxay ku dhasheen baahida loo qabo isticmaal xusuusta badan kombiyuutaradamaadaama 32-bit Processor-ku ay xamili karaan kaliya 4 GB.
Soo-saareyaasha 32-bit waxay kaliya maamuli karaan 32-bit nidaamyada hawlgalka iyo codsiyada. Halka processor 64-bit ah uu noqon karo waxaa maamula 32-bit iyo 64-bit system operating system.
Windows 10 waa nooca ugu dambeeyay ee Windows oo lagu heli karo 32-bit iyo 64-bit versions si loo daboolo dhammaan baahiyaha dadka isticmaala, si kastaba ha ahaatee Windows 11, Microsoft waxay qaadday tallaabada xigta si loogu qasbo dadka isticmaala inay bilaabaan kor u qaad qalabkaagii hore ee kombiyuutarka waxaana kaliya lagu heli karaa nooc 64-bit ah.
Sida loo isticmaalo RAM oo dhan
Markaan ogaanno hawlgalka 32-bit iyo 64-bit processor-ka iyo nidaamyada hawlgalka oo ay weheliyaan xaddidkooda, waqtigu wuxuu yimid inuu ogaado haddii sida loo isticmaalo dhammaan RAM gudaha Windows 10.
Tallaabada 1 - Ogow tilmaamaha
Waxa ugu horreeya ee aan u baahan nahay inaan ogaano waa ogaada xaddiga RAM ee qalabkayagu rakibay. Si aad u ogaato dhammaan tilmaamaha qalabkayaga, waxaan adeegsan doonnaa dalabka CPU-Z, codsi bilaash ah oo aan ka soo dejisan karno isku xirka.
In kasta oo ay run tahay inaan howshan ku fulin karno xulashooyinka qaabeynta Windows, macluumaadka ku saabsan xaddiga RAM ayaa ina marin habaabin kara haddii aan haysanno nooca 32-bit.
Markaan soo dejisanno oo aan ku rakibno dalabka kombiyuutarkayaga, waan fulinnaa. Nidaamkani wuxuu qaadan doonaa dhowr ilbidhiqsi, ilbidhiqsiyo uu arjigu isticmaalo ururi dhammaan qalabka qalabka waxayna na tusi doontaa miis leh tab oo leh dhammaan tilmaamaha qalabkayaga.
Maadaama macluumaadka aan danaynayno inaan ogaano marka hore uu yahay xusuusta rakiban, guji tabka Xasuusta. Qaybta Guud, qaybta Cabbirka, xaddiga RAM ee aad jidh ahaan rakibtay ayaa lagu muujiyaa. Kombiyuutarkaygu wuxuu ku saabsan yahay 16GB.
Waxa kale oo ay na tusaysaa nooca xusuusta (xaaladdayda DDR3) iyo xawaaraha inta jeer ee 800 MHz (798.1). Macluumaadkan waa lagama maarmaan in la ogaado haddii aan ku talo jirno inaan ballaarinno xusuusta kooxdayada, maaddaama ay tahay inaan iibsanno isla xusuusta nooca ah ee aan rakibnay si aan awood ugu yeelanno inaan ballaarinno awoodeeda, maadaama haddii kale aysan la jaanqaadi doonin.
Macluumaadka kale ee aan u baahannahay inaan ogaano haddii aan rabno inaan ballaarinno xusuusta RAM ee qalabkeenna waa inaan ogaano haddii aan haysanno boos bilaash ah (Afyare) si aan u ballaarinno xusuusta ama haddii ay tahay inaan soo iibsanno modules cusub oo leh xusuus badan. Tan waxaa lagu arki karaa tabka, qeybta Xulashada Xusuusta Slot iyo gujinta hoos-u-dhaca.
Kombiyuutarkayga waxaan haystaa 16 GB oo RAM ah iyo sida arjigu na tusayo, loo kala soocay laba qaybood oo 8GB ah. Meel kasta (booska si loo dhigo modulu xusuusta) waxaa ku jira 8GB module. Haddii aan doonayo inaan ballaariyo xusuusta, haddii ay dhacdo in guddigu aqbalo, waa inaan iibsadaa laba qaybood oo 16GB ah wadar ahaan 32GB.
Laakiin ka hor intaanan nafteena bilaabin si aan u iibsanno xusuusta gaarka ah ee kooxdayadu u baahan tahay, waa inaan ogaannaa awoodda xusuusta ugu badan ee ay taageeraan guddiga.
Dhinaca CPU -ga, boodhka iyo qaabka processor -ka ayaa lagu muujiyay. Xogtaan, waa inaan tagnaa websaydhka soo -saaraha si ogow xaddiga ugu badan ee xusuusta ay aqbasho.
Tallaabada 2 - Hubi nooca Windows ee aan rakibnay
Markaan ogaanno xaddiga xusuusta jireed ee kombiyuutarkeennu leeyahay, haddii aan rabno inaan ka faa'iideysanno dhammaan xusuusta ku jirta Windows 10, waa inaan ogaannaa nooca Windows ee aan rakibnay. Si aad u ogaato nooca Windows 10 ee aan rakibnay, waa inaan raacnaa tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan:
Marka hore, waa inaan helnaa ikhtiyaarrada qaabeynta Windows iyada oo loo marayo cogwheel ku yaal menu bilowga ama iyada oo loo marayo furaha furaha Windows + i.
Marka xigta, guji Nidaamka.
Gudaha Nidaamka, tiirka bidix, guji Ku saabsan:
Dhammaan tilmaamaha qalabkayaga ayaa hoos lagu tusi doonaa oo ay la socdaan nooca aan rakibnay.
Waa inaan eegnaa qaybta qaybta nidaamka. Halkan waxay ku tusi doontaa haddii aan haysanno 64-bit ama 32-bit version.
Tallaabada 3 - Ku rakib Windows 10 64 -bit
Haddii halkii laga soo bandhigi lahaa nidaamka hawlgalka 64-bit ay muujineyso nidaamka hawlgalka 32-bit, waxay ka dhigan tahay taas Nooca Windows ayaa xaddidaya isticmaalka xusuusta.
Marka taas haddii aan rabno inaan isticmaalno dhammaan xusuusta jirka ee laga heli karo kombiyuutarkeena, waa inaan rakibnaa nooca 64-bit ee Windows 10.
Farqiga u dhexeeya 32 iyo 64 bits
Marka lagu daro xaddidaadda ugu weyn ee 4 GB ee xusuusta ay bixiyaan 32-bit processor, waxaa jira taxane kale oo xaddidaad la xiriira, tusaale ahaan marka la furayo codsiyo badan ama ka yar.
Haddii aan wada furno codsiyo badan, xaddiga RAM ee aan u baahan doonno aad buu uga sarreeyaa 4 GB oo ah nooca 32-bit-ka ah ee ay na siiyaan. Noocyada 32-bit waxay adeegsan karaan ugu badnaan 2 GB codsi kasta oo furan halka nidaamka hawlgalka 64-bit uu adeegsan karo ilaa 128 GB oo RAM ah.
Iyadoo Codsiyada 32-bit waxay ku shaqeeyaan nidaamyada hawlgalka 64-bit, caksigeeda ma dhacdo, mar kale waxaa sabab u ah xaddiga xusuusta oo lagu maareyn karo codsi furan.
64-bit versions of Windows iyo codsiyada, laguma rakibi karo kombiyuutarrada leh 32-bit processorSi kastaba ha noqotee, haddii aan ku rakibi karno 32-bit versions on processor-yada 64-bit, in kasta oo ficil ahaan qofna caadi ahaan sidaas ma sameeyo maxaa yeelay waxay xaddideysaa helitaanka adeegsiga xusuusta iyo tirada hawl-wadeennada ay isticmaali karto, iyo sidoo kale inaan noo oggolaan inaan adeegsanno 64-bit codsiyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo isticmaalo dhammaan Windows 10 RAM
Waa maxay sababta ay tahay inaadan u beddelin nidaamka hawlgalka Android ee moobaylkaaga
Sida loo keydiyo lambarka QR taleefankaaga gacanta